ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေနေများ တွေ့ဆုံခွင့်ရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေနေများ တွေ့ဆုံခွင့်ရ (MRTV)
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက မတရားအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ကြေငြာခံထားရတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကို ရဲက မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တနင်္ဂနွေနေ့ညက ဘယ်နေရာမှန်း မသိရတဲ့ နေရာသစ်တခုကို ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေ့နေတွေနဲ့ ဒီနေ့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံ ပြောဆိုနိုင်ခဲ့စဉ် သိရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မဆုမြတ်မွန် ကပြောပြပေးမှာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကို ဒီကနေ့ မေ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ်ထဲက နေပြည်တော်ကောင်စီဝန်းထဲမှာ အထူးတရားရုံးနဲ့ ရုံးထုတ်ပါတယ်။
လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ကြားနာဖို့အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ တရားခွင်မှာ ကြားနာမှု မလုပ်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့ မိနစ် ၃၀ လောက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
CRPH၊ NUG တို့အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကို ရဲက မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပြတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်တဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က ခုလိုပြောပြပါတယ်။
"သူကိုယ်တိုင်အပြောကတော့ သတင်းစာမဖတ်ရဘူး။ တီဗီမကြည့်ရဘူး။ ရေဒီယိုနားမထောင်ရဘူး။ တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတာကိုသူမသိပါဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ သေကြေတာတွေ အစရှိသဖြင့်မသိဘူး။ ဒါမယ့် CRPH နဲ့ NUG သိတယ် ဒါကလည်းရဲကနေပြောတာ။ ဘာလို့ပြောလဲဆို သူ့သဘောထား ပေးပါတောင်းတာ။ အဲတွက် CRPH တို့ NUG တို့ကို ရဲကပြောသလောက်သိတယ်။ အဲတော့ NLD ရဲ့ အလားအလာ အန္တရာယ်သိမှာပေါ့။ မေးမြန်းရင်းသူ အဲသတင်းစကားတွေသိ တယ်ပေါ့"
ရွေးကောက်ကွဲ အနိုင်ရ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကိုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီး NUG ကတော့ CRPH ကခန့်အပ်ထားတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖြစ်ပါတယ်။
NLD ပါတီဟာ ပြည်သူတွေအတွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်တာမို့ ပြည်သူတွေရှိနေသရွှေ့ NLD ပါတီရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့နေတွေကတဆင့် သတင်းစကားပါးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနေတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့က အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစပိုင်းက သူ့ရဲ့ နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်ချထားတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပေမဲ့ အတိအကျ မသိရပါဘူး။ တနင်္ဂနွေနေ့ညကတော့ ဘယ်မှန်း မသိတဲ့ နေရာတခုကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပြပါတယ်။
" နောက်သူပြောတာက ခုဘယ်နေရာလဲမေးတယ်။ ကျနော်တို့က နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းထဲလို့ ပြောပါတယ်။နေရာတိကျတော့မသိဘူးပေါ့.။ အဲတော့ ကျမကိုခုထားတဲ့နေရာလည်းကျမမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆို မနေ့ညကကျမကိုပြောင်းတာလို့ ပြောတယ်"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေပြည်တော်မှာ အမှုပေါင်း ၆ ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စွဲထားတဲ့ အမှု ၁ ခုကို နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွှေ့သလားဆိုတာ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေ ခုထိ မသိရသေးပါဘူး။ သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ အထူးတရားခွင်မှာ ဒီနေ့ လူကိုယ်တိုင် ရုံးထုတ်ရာမှာေ ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်၊ အမှုတခုမှာ သူနဲ့ အမှု ၁ တွဲထဲဖြစ်တဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးအောင် တို့လည်း လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံရတဲ့ အနေအထားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ အခြေအနေကို ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက ပြောပါတယ်။
"အခန်းက ၁၀ပေပတ်လည်အခန်း မှာကျမတို့ Face to Face ပါဘဲ။ပြောရတယ်ပေါ့နော်။ တံခါးကိုတော့ အပြင်ကနေပိတ်သွားပေးပါတယ်။ အပြင်မှာတော့လုံခြုံရေးတွေရှိမှာပေါ့နော်။. ထောင့်တွေမှာတော့ CCTV တွေတပ်ထားပါတယ်"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ရှေ့နေနဲ့ အမှုသည် နာရီဝက်ပဲ တွေ့ဆုံ တိုင်ပင်ခွင့်ရတာ အချိန်နည်းတယ်လို့ ပြောကြားကြောင်း ရှေ့နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ဒီနေ့ရုံးချိန်းမှာ အမှုစစ်ဆေးတာကြားနာတာ မလုပ်ဘဲ အရင်ရုံးချိန်းက ရှေ့နေနဲ့အမှုသည် တွေ့ပြီး instruction ယူဖို့ လုပ်ဆောင်တာရယ် နောက်တစ်ချိန်းကို ဘယ်နေ့ဘယ်အမှုကို ဆက်ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာကို ခေါ်ယူပြောဆိုတဲ့ အနေအထားဖြစ်တာမို့အမှုစစ်ဆေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်အမှုကိုတာဝန်ယူရှေ့နေလိုက်ပေးမယ့် ရှေ့နေ ဦးသိန်းလှိုင်ထွန်း(ခ) ဒေါင်းမာန်ဟုန်ကို တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံဆော်မှု လုပ်ဆောင်မှု နဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကနေမှာတရားစွဲထားတဲ့ အတွက်ဆိုပြီး အမှုလိုက်ပါပြီး ပြန်ထွက်လာချိန်မှာဘဲစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်။
"ကျမနဲ့ တူတူ ဦးမျိုးအောင်အမှုကိုလိုက်တဲ့ဦးသိန်းလှိုင်ထွန်းကို ရဲတွေကဖမ်းသွားတယ်ရှင့်။ ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာ လက်ထိပ်ခတ်ဖမ်း တော့ ဘာလို့ဖမ်းလဲဆိုတာမေးတော့ သူ့ကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ ၅၀၅ -ကနဲ့ ဆွဲထားလို့လို့ပြောတယ်" ဖမ်းခံသွားရတဲ့ အခါမှာ ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရှေ့နေအနေနဲ့ ကျမတယောက်ထဲဘဲကျန်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်တော့ ဒီအမှုတွေကလည်း ဆွဲနေတဲ့ အခါကျတော့လေကျမဘဲဆက်လုပ်ပေးရ မှာပါရှင့် "
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇၊ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင် လှုံ့ဆော်မှု လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်အောင်လှုံဆော်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) တို့အပြင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊စုစုပေါင်း နေပြည်တော်မှာ အမှု ၆ မှုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာတော့ အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) နဲ့ အမှု ၁ခုစွဲထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အကြည်အညိုပျက်အောင်လုပ်မှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) နဲ့ အမှုမှာ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမှုတတွဲထဲဖြစ်တဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုလည်း ဒီနေ့ ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ အမှု ၆ မှုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ရုံးချိန်းကိုတော့လာမယ့် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ချိန်းဆို ထားပါတယ်။
အာဏာသိမျး စဈကောငျစီက မတရားအသငျးအဖှဲ့အနနေဲ့ကွငွောခံထားရတဲ့ ပွညျထောငျစု လှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH နဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့ပတျသတျလို့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ သဘောထားကို ရဲက မေးမွနျးခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့ကေ ပွောပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို တနင်ျဂနှနေညေ့က ဘယျနရောမှနျး မသိရတဲ့ နရောသဈတခုကို ပွောငျးရှထေ့ားခဲ့ပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ရှနေ့တှေနေဲ့ ဒီနေ့ ပထမဆုံး တှေ့ဆုံ ပွောဆိုနိုငျခဲ့စဉျ သိရတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ပါတျသကျလို့ ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မဆုမွတျမှနျ ကပွောပွပေးမှာပါ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျဖမျးဆီးခံရတဲ့နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ နပွေညျတျောကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌဒေါကျတာမြိုးအောငျတို့ကို ဒီကနေ့ မေ ၂၄ ရကျနေ့ မှာ နပွေညျတျော ဇမ်ဗူသီရိမွို့ နယျထဲက နပွေညျတျောကောငျစီဝနျးထဲမှာ အထူးတရားရုံးနဲ့ ရုံးထုတျပါတယျ။
လူကိုယျတိုငျ လာရောကျကွားနာဖို့အတှကျ သီးသနျ့လုပျထားတဲ့ တရားခှငျမှာ ကွားနာမှု မလုပျခငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ရှနေ့အေဖှဲ့ မိနဈ ၃၀ လောကျ တှေ့ဆုံ ဆှေးနှေးခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
CRPH၊ NUG တို့အပျေါထားတဲ့ သဘောထားကို ရဲက မေးမွနျးခဲ့ကွောငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောပွတယျလို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒအေဖှဲ့ကို ဦးဆောငျတဲ့ တရားလှတျတျောရှနေ့ကွေီး ဦးခငျမောငျဇျောက ခုလိုပွောပွပါတယျ။
"သူကိုယျတိုငျအပွောကတော့ သတငျးစာမဖတျရဘူး။ တီဗီမကွညျ့ရဘူး။ ရဒေီယိုနားမထောငျရဘူး။ တိုငျးပွညျမှာဖွဈနတောကိုသူမသိပါဘူး။ တိုငျးပွညျမှာ သကွေတောတှေ အစရှိသဖွငျ့မသိဘူး။ ဒါမယျ့ CRPH နဲ့ NUG သိတယျ ဒါကလညျးရဲကနပွေောတာ။ ဘာလို့ပွောလဲဆို သူ့သဘောထား ပေးပါတောငျးတာ။ အဲတှကျ CRPH တို့ NUG တို့ကို ရဲကပွောသလောကျသိတယျ။ အဲတော့ NLD ရဲ့ အလားအလာ အန်တရာယျသိမှာပေါ့။ မေးမွနျးရငျးသူ အဲသတငျးစကားတှသေိ တယျပေါ့"
ရှေးကောကျကှဲ အနိုငျရ NLD လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH ကိုဖှဲ့ထားတာဖွဈပွီး NUG ကတော့ CRPH ကခနျ့အပျထားတဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရဖွဈပါတယျ။
NLD ပါတီဟာ ပွညျသူတှအေတှကျ တညျထောငျထားတဲ့ပါတီဖွဈတာမို့ ပွညျသူတှရှေိနသေရှေ့ NLD ပါတီရှိနမှောဖွဈတယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ရှနေ့တှေကေတဆငျ့ သတငျးစကားပါးခဲ့ပါတယျ။ ပွညျသူတှအေတှကျ ဆုတောငျးပေးနတေယျလို့လညျးပွောကွားခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ တှေ့ဆုံခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ရှနေ့အေဖှဲ့က ပွနျပွောပွပါတယျ။
အာဏာသိမျးတဲ့နကေ့ အဖမျးခံခဲ့ရတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို အစပိုငျးက သူ့ရဲ့ နအေိမျမှာ အကယျြခြုပျခထြားတယျလို့ ခနျ့မှနျးရပမေဲ့ အတိအကြ မသိရပါဘူး။ တနင်ျဂနှနေညေ့ကတော့ ဘယျမှနျး မသိတဲ့ နရောတခုကို ပွောငျးရှခေဲ့တယျလို့ ရှနေ့ကွေီး ဦးခငျမောငျဇျောက ပွောပွပါတယျ။
" နောကျသူပွောတာက ခုဘယျနရောလဲမေးတယျ။ ကနြျောတို့က နပွေညျတျောကောငျစီဝငျးထဲလို့ ပွောပါတယျ။နရောတိကတြော့မသိဘူးပေါ့.။ အဲတော့ ကမြကိုခုထားတဲ့နရောလညျးကမြမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆို မနညေ့ကကမြကိုပွောငျးတာလို့ ပွောတယျ"
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ နပွေညျတျောမှာ အမှုပေါငျး ၆ ခုနဲ့ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ရနျကုနျမှာ စှဲထားတဲ့ အမှု ၁ ခုကို နပွေညျတျောကို ပွောငျးရှသေ့လားဆိုတာ သူ့ရဲ့ ရှနေ့တှေေ ခုထိ မသိရသေးပါဘူး။ သီးသနျ့လုပျထားတဲ့ အထူးတရားခှငျမှာ ဒီနေ့ လူကိုယျတိုငျ ရုံးထုတျရာမှာေ ဒျါအောငျဆနျးစုကွညျအပွငျ၊ အမှုတခုမှာ သူနဲ့ အမှု ၁ တှဲထဲဖွဈတဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နဲ့နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဌ ဒေါကျတာ မြိုးအောငျ တို့လညျး လူကိုယျတိုငျ လာရောကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီနေ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့နဲ့ တှဆေုံ့ရတဲ့ အနအေထားနဲ့တှဆေုံ့ခှငျ့ရတဲ့ အခွအေနကေို ဥပဒအေကြိုးဆောငျအဖှဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ရှနေ့ေ ဒျေါမငျးမငျးစိုးက ပွောပါတယျ။
"အခနျးက ၁၀ပပေတျလညျအခနျး မှာကမြတို့ Face to Face ပါဘဲ။ပွောရတယျပေါ့နျော။ တံခါးကိုတော့ အပွငျကနပေိတျသှားပေးပါတယျ။ အပွငျမှာတော့လုံခွုံရေးတှရှေိမှာပေါ့နျော။. ထောငျ့တှမှောတော့ CCTV တှတေပျထားပါတယျ"
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကတော့ ရှနေ့နေဲ့ အမှုသညျ နာရီဝကျပဲ တှဆေုံ့ တိုငျပငျခှငျ့ရတာ အခြိနျနညျးတယျလို့ ပွောကွားကွောငျး ရှနေ့ဒေျေါမငျးမငျးစိုးက ပွနျပွောပွပါတယျ။
ဒီနရေုံ့းခြိနျးမှာ အမှုစဈဆေးတာကွားနာတာ မလုပျဘဲ အရငျရုံးခြိနျးက ရှနေ့နေဲ့အမှုသညျ တှပွေီ့း instruction ယူဖို့ လုပျဆောငျတာရယျ နောကျတဈခြိနျးကို ဘယျနဘေ့ယျအမှုကို ဆကျဆောငျရှကျမယျ ဆိုတာကို ချေါယူပွောဆိုတဲ့ အနအေထားဖွဈတာမို့အမှုစဈဆေးတာမြိုးတော့မရှိဘူးလို့ ရှနေ့ေ ဒျေါမငျးမငျးစိုးက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာ နပွေညျတျောကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျအမှုကိုတာဝနျယူရှနေ့လေိုကျပေးမယျ့ ရှနေ့ေ ဦးသိနျးလှိုငျထှနျး(ခ) ဒေါငျးမာနျဟုနျကို တပျမတျောပွိုကှဲအောငျ လှုံဆျောမှု လုပျဆောငျမှု နဲ့ ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဆိပျကမျးမွို့နယျကနမှောတရားစှဲထားတဲ့ အတှကျဆိုပွီး အမှုလိုကျပါပွီး ပွနျထှကျလာခြိနျမှာဘဲစဈတပျက ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ ရှနေ့ေ ဒျေါမငျးမငျးစိုးကပွောပါတယျ။
"ကမြနဲ့ တူတူ ဦးမြိုးအောငျအမှုကိုလိုကျတဲ့ဦးသိနျးလှိုငျထှနျးကို ရဲတှကေဖမျးသှားတယျရှငျ့။ ဖမျးသှားတယျဆိုတာ လကျထိပျခတျဖမျး တော့ ဘာလို့ဖမျးလဲဆိုတာမေးတော့ သူ့ကို ရနျကုနျဆိပျကမျးမွို့နယျမှာ ၅၀၅ -ကနဲ့ ဆှဲထားလို့လို့ပွောတယျ" ဖမျးခံသှားရတဲ့ အခါမှာ ဒေါကျတာမြိုးအောငျရှနေ့အေနနေဲ့ ကမြတယောကျထဲဘဲကနျြခဲ့တဲ့သဘောဖွဈတော့ ဒီအမှုတှကေလညျး ဆှဲနတေဲ့ အခါကတြော့လကေမြဘဲဆကျလုပျပေးရ မှာပါရှငျ့ "
အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒပေုဒျမ ၈၊ ဆကျသှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇၊ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျ လှုံ့ဆျောမှု လုပျဆောငျမှုဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅ (ခ)၊ နိုငျငံတျောအကွညျညိုပကျြအောငျလှုံဆျောမှုဥပဒေ ပုဒျမ ၁၂၄ (က) တို့အပွငျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ ထိနျးသိမျးကာကှယျရေး အကျဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊စုစုပေါငျး နပွေညျတျောမှာ အမှု ၆ မှုနဲ့ တရားရငျဆိုငျနရေပါတယျ။
ရနျကုနျမှာတော့ အစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒေ ပုဒျမ ၃ (၁) (ဂ) နဲ့ အမှု ၁ခုစှဲထားပါတယျ။ နိုငျငံတျော အကွညျအညိုပကျြအောငျလုပျမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၂၄ (က) နဲ့ အမှုမှာ ဒျေါဆောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ အမှုတတှဲထဲဖွဈတဲ့သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ နပွေညျတျော ကောငျစီဥက်ကဋ်ဌဒေါကျတာမြိုးအောငျတို့ကိုလညျး ဒီနေ့ ရုံးထုတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နပွေညျတျောမှာ အမှု ၆ မှုကို ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအတှကျ နောကျတဈကွိမျရုံးခြိနျးကိုတော့လာမယျ့ ဇှနျလ ၇ ရကျနမှေ့ာ ခြိနျးဆို ထားပါတယျ။
ပြည်သူရှိနေသရွေ့ ပါတီလည်းရှိမည် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်